Ananda Thuriya’s Death Song (1) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင္ကာ
Ananda Thuriya’s Death Song (1)	Posted by mm thinker on December 29, 2008
Posted in: Literature, Poem.	Tagged: Classic, Literature, Poem.	ပုဂံခေတ်က အနန္တသူရိယအမတ်ကြီးရဲ့ ကွပ်မျက်အံ့မူးမူးမှာ ရေးသွားတဲ့ မျက်ဖြေလင်္ကာဟာ မြန်မာစာပေမှာ ထင်ရှားဆဲပါ။ တရားသဘောတွေ ပြည့်နေတဲ့ ဒီလင်္ကာကြီးကို မြန်မာပညာရှင်နှစ်ဦးနဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးပညာရှင်နှစ်ဦးတို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ပြန်ဆိုကြတာကို အရသာခံကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကဗျာကျော် J. Shirley ရဲ့ “Death the Leveller” နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့ နောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကဗျာမူရင်းရော ဘာသာပြန်တွေရောကို ဒေါက်တာခင်မောင်ညွှန့်ရဲ့ An Outline History of Myanmar Literature (Pagan Period to Kon-Baung Period) က ယူပါတယ်။
Court-life, with an host of Ministers about one
And in this world must ever be It is the Law.
← အေျပာင္းအေရႊ႕	2009 Korean Gov Scholarship →	0 comments on “Ananda Thuriya’s Death Song (1)”
MhawSayar on December 29, 2008 at 4:20 pm said:
sandar on January 1, 2009 at 10:38 am said:
mmthinker on January 1, 2009 at 10:45 am said: